तपाईंको आफ्नै विमान Chartering धेरै द्वारा एक लक्जरी मानिन्छ. तथापि, त्यहाँ अक्सर पर्याप्त सजिलै लक्जरी को लागत पल्ला झुकन गर्न सक्ने एक turboprop जेट चार्टर को लाभ हो. प्रमुख लाभ सुविधा छ, र यसको सुविधाको धेरै पक्षबाट आउँछ. सबैभन्दा ठूलो सुविधा तपाईं tsa जोगिन र नियमित सार्वजनिक विमानस्थलको मा अपरिचित संग आफ्नो कोहनी बम्प जोगिन सक्नुहुन्छ. डगलस एडम्स त्यहाँ एक सार्वजनिक विमानस्थल रूपमा संसारमा कुरूप केही छ कि यसो भन्नुभयो. उहाँले एक बिन्दु थियो. एक चार्टर्ड विमान एक धेरै सानो विमानस्थलको मा आएछन् गर्न सकिन्छ देखि, तपाईं भन्सार लाइनहरु जोगिन सक्छौं, tsa, सार्वजनिक उडान को र अन्य बाधाहरु.
एक turboprop जेट चार्टर को अर्को फाइदा तपाईं वास्तवमा यात्रा गर्दा काम गर्न सक्छन् भन्ने छ. हावामा, एक धेरै सानो विमान मा, आफ्नो रुचि सिटमा, तपाईं सजिलै आफ्नो ल्यापटप वा फोनमा काम गर्न सक्छन्. तपाईं अवतरण गरेपछि प्रस्तुति बनाउन जाँदैछन् भने, वा केही व्यवसाय साझेदार पूरा, तपाईं प्रस्तुति वा बैठक यात्रामा लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ. सबैभन्दा विमानहरु इन्टरनेट जडान, फोन, कि यो लगभग दोस्रो कार्यालय बनाउन फ्याक्स र अन्य सुविधा.
तपाईंको आफ्नै जेट chartering को अन्य प्रमुख लाभ गोपनीयता र गोपनीयता छन्. एक चार्टर्ड विमान मा, कसैले तपाईँको ल्यापटप स्क्रिनमा आफ्नो काँध मा देख चिन्ता छैन. तपाईं विमान आफैलाई चार्टर्ड छ भने, तपाईं आफ्नो सह-यात्रु आमन्त्रण गर्न स्वतन्त्रता छन्. यदि विमान आफ्नो कम्पनी द्वारा भाडामा लिएको छ, आफ्नो सह-यात्रु आफ्नो आफ्नै सहकर्मी हुनेछ, तपाईं संग यात्रा गर्ने कम्पनी द्वारा deputed छ आधारमा गर्न.
गति तपाईंको आफ्नै विमान chartering अर्को प्रमुख लाभ छ. देखि चार्टर्ड विमानहरु सानो रनवे आवश्यक, त्यहाँ तिनीहरूले प्रयोग गर्न सक्ने विमानस्थलको को धेरै विकल्प छन्. यो तपाईं र विमानस्थलबाट आफ्नो यात्रा समय कम गर्न सक्छ मतलब. त्यसपछि, एक पटक तपाईं विमानस्थलमा हो, तपाईं पनि भन्सार लाम मा समय बचत. कुल मिलाएर, हामी turboprop जेट चार्टर को लाभ यो धेरै बस एक लक्जरी भन्दा बढी बनाउन फेला.
राजा एयर 350
राजा एयर 300
राजा एयर B200
राजा एयर 200
राजा एयर 100
राजा एयर 90